Filtrer les éléments par date : lundi, 20 novembre 2017
lundi, 20 novembre 2017 23:37
Antsonjombe: Kopi Kolé 2017
Notontosaina ny alahady 19 novambra ny fifaninana KOPI KOLE andiany faha 5 izay nokarakarain’ny TV PLUS Madagascar, natao teny amin’ny COLISEUM Antsonjobe.
Nibata ny amboara goavana tamin’izany ny KOPI KOLE TAHIRY, raha i Elidiot kosa no nandrombaka ny Coup de cœur. I TSILIRA no nahazo ny Découverte izay narahin’i Jacky RANDRIA tamin’ny Coup de Cœur Découverte.
Marihina moa fa dia tsy hisy ny ny KOPI KOLE amin’io taona ho avy io noho ny fifidianana ho filoham-pirenena fa amin’ny 2019 indray no hiverina indray ny fifaninanana.
lundi, 20 novembre 2017 19:04
Morondava: Tsy nety nandray varin’ny HVM ireo mpanao HIMO
Manatanteraka asa tanamaro (HIMO) mandritra ny telo andro, manomboka androany ny Tanora HVM avy ao Antananarivo sy ny eto Morondava, fanomanana ny fahatongavan’ny filohan’ny Repoblika Hery Rajaonarimampianina aty hitokana sekoly avy amin’ny tetikasa PASSOBA ny alarobia 22 novambra 2017 izao, fitokanana efa tokony natao tamin’ny 12 oktobra 2017 saingy nofoanana tamin’ny ora farany na dia efa vory atrika avokoa aza ny rehetra, eny hatramin’ny vahiny avy amin’ny Vondrona Eoropeana mpamatsy vola.
Olona miisa 500 eo no nahetsika tamin’ity HIMO ity, nanadio teo Tsimahavaokely hatreo Namahora. Fotsimbarin’ny BNGRC no nokasaina hatao tambin’ny asa. Tsy nety nandray izany anefa ireo mpandray anjara, fa hoe : “vary pesta” ka nitaky ny hanomezana vola.
Nikoropaka ny mpikarakara, nitady vola tamin’ny mpandraharaha teto an-toerana, nandoavana ny vola tambinasan’ireo mpanao HIMO, izay nomena 3.000 Ariary isan’olona.
lundi, 20 novembre 2017 15:23
Sendikan’ny Mpandraharahan'ny oniversitem-panjakana: Manatanteraka kaongresy nasionaly aty Mahajanga
Fihaonamben'ireo mpandraharahan'ny oniversitem-panjakana manerana ny nosy na ny Syndicat du Personnel Administratif et Technique des Universités (SPATU) no hatrehan'ireo mpandraharaha avy amin'ny oniversite rehetra mandritra ny efatra andro eto Mahajanga.
Kaongresy andiany fahavalo izao tontosaina izao izay nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny maraina teo tao amin'ny Tranoben'ny kolontsaina Mahajanga.
Amin'ny maha sendika azy dia fikatsahana sy fitakiana ary fiarovana ny tombotsoan'ireo mpandraharaha no tena imasoana, izay nohamafisin-dRakotoarinetra Joseph, filoha nasionalin'ny SPATU fa tsy voatery takiana amin'ny alalan'ny korontana sy savorovoro.
lundi, 20 novembre 2017 14:19
Lodsia: Hisokatra ny 22 novambra ny taom-piotazana, sambo roa mahazaka 6 500 taonina avy no ho avy
Ny alarobia 22 novambra izao amin’ny 6 ora hariva ny fisokafan’ny taom-piotazana sy taom-panondranana lodsia amin’ny alalan’ny sambo amin’ity taona 2017 ity, ka sambo roa samy mahazaka 6 500 taonina avy no ho tonga eto Toamasina, ka tonga ny talata 21 novambra ny sambo voalohany raha dimy andro aorian’izay ny sambo faharoa.
lundi, 20 novembre 2017 10:04
Oniversiten'i Mahajanga: Nivoaka ny datin'ny CODIS
Fantatra fa amin'ny 04 hatramin'ny 10 desambra 2017 izao no hiakatra Conseil de discipline ireo mpianatra voakasik'izany eny amin'ny oniversiten'i Mahajanga.
Ny 08-09-10 novambra teo no saika nanaovana izany ary efa voazara tamin'ireo mpianatra ny taratasy fiantsoana saingy najanona tampoka izany taorian'ny fivoarian'ireo mpisehatra voakasika.
Tamin'izany dia 51 no nahazo fiantsoana. Tamin'ity daty vaovao ity, kosa dia nihena ny isan'ireo mpianatra voaantso hiatrika izany conseil de discipline izany. 30 avy amin'ny faritra Sofia, 2 avy eto Mahajanga, 2 hafa avy any Vakinakaratra ary 6 avy any Toamasina. Manampy ireo ny 6 avy any DiANA sy ny 5 avy any SAVA.
Mbola nanamafy ireo mpianatra sasany fa tsy hanatrika io fampiakarana filankevim-pitantana io satria tsy nandray anjara tamin'ny fanakorontana sy fanimbana foto-drafitr'asa nandritra ny fitokonana natao izy ireo.